Bogga ugu weyn 20 Software Tracking Investment ugu Fiican 2021 | Tusaha Khubarada
Waa maxay Software -ka Raadinta Maalgashigu?
Eeg 15 Raad -raacayaasha ugu Wanaagsan Sanadka 2021 | Talooyinka Maareynta Lacagta
Waxa la tixgelinayo marka la dooranayo Software -ka Raadinta Maalgashiga
Tiro aad u badan oo ah Hantida Raad -raaca ah
Xawaaraha iyo Saxnimada
#1. Raasamaalka Shaqsiga
#2. Ilaalada Lacagta
#3. Raad -raacaha SigFig Portfolio
#4. Maareeyaha Portfolio Morningstar
#6. Waraaqaha Google
Eeg 21 Maalgashi oo Hubaal ah waxaad maalgashan kartaa $ 100 oo aad samayn kartaa $ 1000 maalintii
Fidelity Vs Vanguard Investment 2021: Waa maxay sababta ay tahay inaad u doorato mid kasta oo ka mid ah dallaaliyeyaashaas
#12. Degdeg Premier
#13. M1 Maaliyadda
#15. Maareeyaha Xisaabta Maalgashiga
#16. Maamulaha Sanduuqa
#19. Sawir -qaade Portfolio
#20. Raad -raacaha Lacagta YahooFinance
Waan ogahay cidhiidhiga aan dhex maro inaan isku dayo inaan xasuusto furaha sirta ah ee aaladaha kala duwan ee aan ku leeyahay koonto. Waxay noqon kartaa niyad -jab! Xitaa waad caddeyn kartaa haddii aad leedahay koontooyin badan.
Waxay la mid tahay markaad leedahay xisaabaadyo maalgelin oo badan. Run baa loo sheegay, la socodka dhammaan xisaabaadka ma sahlana haba yaraatee. Tani waa sababta oo ah madal kasta waxay leedahay faa'iidooyinkeeda oo leh furayaal sir ah oo kala duwan. Had iyo jeer way adkaan doontaa in lala socdo dhammaan adigoon dhibsanayn naftaada.
Tani waa halka Software -ka Raadinta Maalgashigu u yimaado inuu ciyaaro. Aaladda raadraaca maalgashiga, waxaad si fudud ugu maamuli kartaa dhammaan xisaabaadkaaga maalgashiga hal meel. Sidoo kale, waad la socon kartaa kaydkaaga, oo waad la socon kartaa maalgelintaada.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira boqolaal ka mid ah software -ka dabagalka faylalka maalgelinta ee maanta la heli karo, laakiin ha ka welwelin walaaca aad la kulmi doonto raadinta, waxaan kuu sameeyay howsha lugta.
Maqaalkan, waxaan ku soo koobay 20 -ka ugu wanaagsan ee raadraaca maalgashiga iyo softiweerka maareynta faylalka oo kaa caawin doona fududeynta noloshaada adduunka maalgashiga. Waxaad kaloo samayn kartaa helitaanka marinnada Shabakadaha Talooyinka Maalgelinta ee leh Xogta Waqtiga.
Dhex mari tusmada tusmada si aad u hesho dulmar guud.
Software -ka Raadinta Maalgashiga waa barnaamij kombiyuutar ama raad -raac kuu oggolaanaya inaad aragto faahfaahinta ku saabsan maalgelintaada.
Waxay leedahay astaamo sida iibsashada, iibinta, saami qaybsiga, faa'iidada raasumaalka, iyo xogta qiimaha. Adigoo adeegsanaya raadraaca softiweerka maalgashiga, waxaad ku falanqeyn kartaa maalgelintaada oo aad ku ogaan kartaa kuwa ugu wax -qabadka wanaagsan iyo kuwa dib -u -dhaca leh.
Moreso, waxaad awoodi doontaa inaad aragto sida qoondayntaada hadda ay ula jaanqaadayso yoolalkaaga muddada-dheer.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah sifooyinka ay tahay in la tixgeliyo marka la dooranayo Software -ka Raadinta Maalgashiga:
Kharashku aad ayuu muhiim u yahay. Waxaa jira softwares dabagalka maalgashiga ugu fiican oo bilaash ah oo aad ku bilaabi karto. Qaarkood waxay leeyihiin waxyaabo lagu daro oo la iibsan karo si kor loogu qaado waayo-aragnimada, laakiin hab bilaash ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasha cusub waa waajib.
Raadraaca faylalka maxaa faa’iido u leh haddii aadan raaci karin lacagaha aad leedahay? Raad -raac wanaagsan ayaa kuu oggolaan doona inaad raacdo dhammaan noocyada maalgashiyada, laga bilaabo saamiyada iyo curaarta ilaa ETF -yada. Xitaa waxaa jira raadraacayaasha faylalka crypto.
Kuwani waa sifooyin muhiim ah oo ah raadraaca softiweerka waa inuu ka mid noqdaa softiweerka raadraaca faylalka maalgelinta ee ugu wanaagsan. U raadso raad -raac si dhakhso leh ugu raran taleefankaaga ama laptop -kaaga.
Goorma tixgelinta Software Tracking Investment, u raadi raadraacayaasha leh interface-ku-habboon. Tayadaas, qof walba si fudud ayuu u qali karaa.
#1. Qasnadda Shaqsiyeed
Barnaamijkan kormeerka maalgashiga maaliyadeed ayaa ah kan ugu wanaagsan sumadaha la tartamaya waana badeecada ugu caansan ee aad u adeegsan karto raadinta maalgashiga.
Raasamaalka Shakhsiyeed wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto dhammaan akoonnadaada dashboard -ka si aad u aragto qiimahaaga saafiga ah oo aad u go'aamiso tayada faylalkaaga hadda jira adiga oo adeegsanaya Fee Falanqeeyaha ama aaladaha Hubinta Maalgashiga.
Adeegyada kale ee aad ku heli karto Raasamaalka Shaqsiga waxaa ka mid ah
401 (k) Falanqeeyaha Fee kaas oo go'aamiya khidmadaha aad dhab ahaan bixinayso oo ku tilmaamaya xulashooyinka maalgashi ee jaban ee ku jira qorshahaaga.
Baaritaanka Maalgashiga kaas oo ku siinaya qiimeyn ku saabsan halka aad joogto xisaabaadkaaga kala duwan oo ay ku jiraan talooyinka bartilmaameedka faylalka, dib -u -dheelitirka talooyinka, oo go'aamiya heerka halista ee faylalkaaga.
Xisaabiyaha Hawlgabka kaas oo kuu oggolaanaya inaad xisaabiso dakhligaaga hawlgabka ee billaha ah ee aad filayso wuxuuna mashruucaa dakhligaaga Lambarka Bulshada.
Guji xiriirka hoose si aad u hesho macluumaad dheeraad ah
Guji hoosta si aad u hesho raadraacan maalgashiga
Hel Tracker Software
Patrol Money waa mid ka mid ah barnaamijyada raadraaca maalgashiga ugu wanaagsan oo leh xirmo xoog leh oo astaamo ah oo ka caawiya maalgashadayaasha inay la socdaan faylalka iyo miisaaniyadda.
Markaad isku xirto koontadaada, waxaad arki kartaa iibsiyadaada waqtiga dhabta ah waxaadna heli kartaa casriyeyn si ay kaaga caawiso inaad si fiican u fahanto waxa ka socda lacagtaada.
Waxyaabaha aad ku samayn karto Ilaalada Lacagta waxaa ka mid ah:
Hesho Dashboardka Aragga ee Hormarsan. Tani waxay si dhaqso ah kuu siin doontaa dhaqaalahaaga.
Helitaanka si aad u aragto lacagtaada oo socota oo ka baxaysa.
La soco maalgashigaaga oo ku xidh iyaga akoonno kale oo maalgashi oo aad leedahay.
Booqo websaydhka rasmiga ah si aad u hesho raad -raackan.
Kani waa software raadraac kale oo maalgashi oo wanaagsan oo kaa caawin kara inaad lasocotid faylalkaaga sanduuqa. Asal ahaan, Sigfig waa madal la-taliye robo oo bixiya dhismaha iyo maareynta faylalka iswada.
Software -kan, waxaad ku heli doontaa iimayl kooban oo muujinaya waxqabadkaaga maalgelintaada iyo warbixinnada joogtada ah oo leh burburka wararka ugu dambeeyay ee faylalka.
Waxyaabaha kale ee aad ku samayn karto Tracker Portfolio SigFig:
Waafajinta xisaabaadkaaga maalgashiga in ka badan 80 shirkadood oo dillaaliin ah.
Falanqeeyaa khidmadahaaga oo ay ku jiraan khidmadaha qarsoon.
Guji hoosta si aad u hesho SigFig
Maareeyaha Portfolio ee Morningstar waa mid ka mid ah raadraaca maalgashi ee ugu wanaagsan oo u oggolaanaya maalgashadayaasha inay soo dejiyaan ama gacanta ku galaan hantidooda oo ay helaan aragtiyo qiimo leh.
Waa raajo faylal-hoosaad Morningstar oo lacag la'aan ah oo muujinaya kala-duwanaanshaha qaabka saamiyada, qaybta iyo burburka qaabka, qaybinta juquraafi ahaan, iyo soo-koobidda khidmadaha iyo kharashyada.
Waxyaabaha aad ku samayn karto barnaamijkan raadraaca maalgashi ee ugu wanaagsan:
Eeg waxa hantidaada dhabta ahi u adeegsanayso faylalka faylalka X-Ray.
Isbarbardhig maalgashiyo badan.
La soco dhaqdhaqaaqa suuqa adiga oo isticmaalaya khariidada kulaylka.
Mint waa raadinta kale ee maalgashiga ugu fiican iyo softiweerka maareynta faylalka oo caan ah. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad hal shaashad ku geliso macluumaadka xisaabta hay'adaha kale.
Waxyaabaha aad ku samayn karto Mint waxaa ka mid ah:
La socoshada iyo maareynta faylalkaaga maalgelin wax ku ool ah.
la soco maalgelintaada iyo miisaaniyaddaada.
Falanqee khidmadahaaga si aad u ogaato heerka kobaca maalgashigaaga.
Si aad u hesho reexaan, guji hoosta
Waraaqaha Google ayaa ah software -ka ugu wanaagsan ee raadraaca maalgashiga google oo ku habboon Hawlgabka Hawlgabka.
Software -kaan, waxaad ku qaadi kartaa koontaroolka guud ee xogtaada maxaa yeelay waxaa lagu siin doonaa macluumaad kugu filan oo aad ku maamuli karto xitaa faylalka tacliinta ugu adag.
Waxyaabaha aad ku samayn karto xaashidan dabagalka maalgelinta:
Ka faa'iidayso hawlaha maaliyadeed ee Google si aad u soo jiidato macluumaadka ku saabsan saamiyada, ETF, ama sanduuqa wadaagga ah.
Isku dheeli tir faylalkaaga.
Guji hoosta si aad u hesho Waraaqaha Google.
Eeg 21 Maalgashi sugan aad awoodid $ 100 maal gali oo $ 1000 maalintii samee
BankTree waa maalgalin kale oo raadraaca maalgashiga ugu fiican oo kuu oggolaanaya inaad maamusho maaliyaddaada.
Waxay leedahay istcimaal saaxiibtinimo leh oo kuu sahli doona duubista dakhligaaga iyo kharashaadkaaga.
Waxyaabaha aad ku samayn karto barnaamijkan raadraaca maalgashiga:
Hel casharro fiidiyow oo dhammaystiran,
Qiimayaasha suuqa ee ugu dambeeyay dhammaan maalgashiyadaada
Isku waafaji xogtaada app -ka BankTree Mobile oo leh mashiinka desktop -ka
Kani waa barnaamij dhaqso leh oo si sahlan loo adeegsan karo oo hufan oo ah kormeer maalgashi maaliyadeed oo noloshaada maaliyadeed u kaxeynaya hal goob iyada oo aan la gelin rukunno qaali ah ama cusboonaysiin khasab ah.
Si aan kala go 'lahayn ayaad uga beddeli kartaa codsiyada kale ee maaliyadeed, mana aha inaad faahfaahintaada soo geliso internetka.
Iyada oo la adeegsanayo Moneyspire, waxaad kula socon kartaa xisaabaadkaaga iyo dheelitirkaaga, oo aad ku heli kartaa xogta kharashaadka iyo dakhliga.
Waxyaabaha kale ee aad ku samayn karto barnaamijkan raadraaca maalgashi ee ugu wanaagsan:
Hel ogeysiisyada biilka iyo deebaajiga ama dhigaalka mustaqbalka
Abuur warbixino iyo khariidado dhammaystiran si aad u aragto halka lacagtaadu ku socoto, oo lagu daray xarayn degdeg ah oo cashuur celin ah.
Miisaaniyado deji, qiyaaso hadhaaga xisaabta mustaqbalka, dib u heshiisiinta baanka.
Si toos ah ugu xir bangigaaga oo isla markiiba soo dejiso wareejinta iyo biilasha.
Xusuusnow, haddii bangigaagu uusan taageerin xiriirkan tooska ah, Moneyspire Connect ayaa waxtar u yeelan doonta.
Guji hoosta si aad u hesho Moneyspire
Haddii aad u baahan tahay inaad ka shaqeyso qiimahaaga saafiga ah, markaa WeVest ayaa adiga kugu habboon.
Iyada oo la adeegsanayo barnaamijkan raadraaca maalgashiga bilaashka ah, waxaad isku keeni kartaa dhammaan akoonnadaada oo aad saadaalin kartaa mustaqbalkaaga maaliyadeed oo dhan.
Sidoo kale, waxaad si fudud ula socon kartaa qiimahaaga saafiga ah, kaydin kartaa oo gaari kartaa qorshayaasha hawlgabkaaga.
Waxyaabaha kale ee aad ku samayn karto WeVest:
Isbarbar dhig qiimahaaga saafiga ah iyo qiimaha dadka ee dadka kale.
Malaha u qoondee lacagtaada si aad u gaarto yoolalkaaga maaliyadeed.
Guji hoosta si aad waxbadan uga ogaato oo aad u hesho WeVest:
Software -ka kale ee raadraaca maalgashiga ugu fiican oo aan kaliya xusin karin waa Sharesight.
Sharesight wuxuu kaa caawinayaa inaad soo dhoofsato diiwaannadaada ganacsi si aad si habboon ula socon karto hab dhaqankaaga shirkadda.
Si aad si dhaw ula socoto kaydintaada, waxaa jira digniin joogto ah oo qiimo iyo lacag ah oo ay weheliso xog dhammaystiran. Tan waxaa ka mid ah xereyn degdeg ah ee canshuur celinta.
Waxyaabaha aad ku samayn karto Sharesight:
Si fudud ula wadaag warbixintaada canshuurta dadka kale
La soco dhaqaalahaaga
Diiwaangeli maalgashiyada aan la qorin.
Guji xiriirka hoose si aad u hesho Sharesight
StockRover software kale oo raadraaca maalgashiga ugu fiican oo kuu oggolaanaya inaad isku xirto koontadaada dilaalnimada. Marka, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad u tagto raadraaca maalgashiga haddii aad leedahay xisaabaad dilaalnimo.
Moreso, waa aaladda saxda ah ee lagu falanqeynayo faylalka faylalka ee ka soo horjeeda bartilmaameedyada. Waxa xiiso leh, waad awoodaa isku xirka xisaabaadka sida Vanguard, Charles Schwab, Fidelity, TD Ameritrade, Wells Fargo, E*Ganacsiga, iyo Chase.
Quicken Premier waa madal kale oo maalgashi si loola socdo oo dib loogu eego faylalka tacliimeed. Haddii aadan jeclayn codsiyada shabakadda, doorashadan ayaa ku habboon adiga.
Waxaad ku xiriirin doontaa xisaabaadkaaga maalgashiga app -ka Quicken. Oo haddii koonto ku xiran tahay, Quicken wuxuu kormeeraa hawlgallada maalgelinta, oo ay ku jiraan dhammaan wareejinta akoonnada.
Moreso, Quicken wuxuu kaloo kuu oggolaanayaa inaad gasho astaamaha X-Ray ee Morningstar isla markaana aad marin u hesho faahfaahinta Morningstar adigoon gacanta ku gelin faylalkaaga.
Adeegyada kale ee aad ka heli karto Quicken Premier:
Deji qoondaynta hantida bartilmaameedka ah
Isbarbardhig bartilmaameedkaaga iyo qoondaynta hantida dhabta ah ee faylalkaaga.
Dib -u -eegis ku samee qoondaynta hantida ee heerka faylalka, heerka koontada, ama amniga shaqsiyeed.
Guji hoosta si aad u hesho Quicken Premier
#13. Maaliyadda M1
Maaliyadda M1 waxay daaha ka qaadaysaa haysashadu sida jeex -jeex. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso ayaa ah inaad ku darto boqolkiiba jeex kasta, maalgeliso Pie -gaaga oo aad haysato faylal kayd ah.
Waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad ka faa'iidaysato muujinta Pies -ka Khabiirka ee M1. Waxay leedahay kooxda maareynta hantida gudaha ee kuwa doorta inay si firfircoon u maalgashadaan laakiin hagaajiya soo-celinta.
Tilmaamahani wuxuu ku habboon yahay maalgashadayaasha ka soo beddelaya lataliyaha Robo. M1 Maaliyadduna ma laha iibinta iyo khidmadaha dilaalnimada.
Betterment waa mid ka mid ah softwares -ka ugu wanaagsan ee raadraaca maalgashiga bilaashka ah ee mudan in loo socdo. Iyada oo leh barnaamijka maalgelinta casriga ah ee Betterment oo loo heli karo labada Android iyo macruufka, waxaad ku eegi kartaa mudnaanta iyo hawlgalka koontadaada.
Moreso, waxaad awoodi doontaa inaad ku maamusho dhaqaalahaaga hal meel oo xitaa aad isku waafajiso akoonnadaada dibedda iyo maaliyado kale.
Waxyaabaha aad ku samayn karto Betterment waxaa ka mid ah:
Hubi dheelitirka iyo soo celinta faylalkaaga waqtiga-dhabta ah
Lacag dhig oo ka bixi lacag waqti kasta meel kasta.
Maamul debaajigaaga iyo qoondaynta saamiyadaada.
Guji hoosta si aad u hesho Betterment.
Haddii aad raadinayso barnaamij leh astaamo gorfayn oo hufan, Maareeyaha Xisaabaadka Maalgashiga ayaa qaadi doona tallaabada xigta.
Iyada oo la raacayo raadinta maalgashiga ugu wanaagsan iyo software -ka maareynta faylalka, waxaad yeelan doontaa soo koobitaan garaafyo ah ee qoondaynta hantida faylalkaaga.
Sidoo kale isbarbar dhig qoondaynta hantidaada bartilmaameedka ah, adoo ogaanaya macaamilka aad u baahan tahay si aad isugu dheellitirto bartilmaameedka.
Maareeyaha Koontada Maalgashiga wuxuu ku shaqeeyaa Mac iyo Linux mar haddii aad ku dayato Windows, sida Parallels ama VMWare Fusion.
Shabakadaha Talooyinka Maalgashiga ee ugu Fiican ee leh Xogta Waqtiga ee 151
#16. Maareeyaha Lacagta
Maareeyaha Sanduuqa ayaa ah software -ka ugu wanaagsan ee raadraaca maalgashiga ee mac.
Waxay bixisaa dabagalka faylalka tacliimeed ee aadka loo miisaami karo, jaantus hufan, iyo warbixin qoto dheer iyo dib u eegista natiijooyinka.
Dhinaca kale ee tani waa in hubaal ay jirto qalooc waxbarasho.
Software -kani waa software si fiican loo dhisay oo leh fiidiyowyo bilaash ah iyo hageyaal ku jira shabakadda kuwaas oo aad u dhammaystiran oo la cusboonaysiiyay.
Guji hoosta si aad u hesho Maamulaha Sanduuqa.
#17. in isla
Ma rabtaa raad -raac saamiyadaada? Ticker -ku si fiican buu kuugu adeegi karaa. Adigoo adeegsanaya barnaamijka Ticker, waxaad kula socon kartaa faylalkaaga maalgashiga meel kasta.
Markaad gacantaada ku gasho iibsiyadaada oo aad abuurto faylalkaaga, abku wuxuu bilaabi doonaa inuu la socdo goobtaada. Tani waxay kaa caawineysaa inaad isticmaasho Ticker adiga oo aan ku xirnayn koonto dilaalnimo.
Si kastaba ha noqotee, waxaad heli kartaa ogeysiisyo riixitaan ah oo ku saabsan casriyeynta qiimaha saamiyada waqtiga-dhabta ah iyo xitaa waxaad dejin kartaa digniino u gaar ah mar kasta oo saamiyadu ka sarreyso ama ka hooseyso kicinta.
Waxyaabaha kale ee aad ku samayn karto Ticker waxaa ka mid ah:
Samee liisas badan oo daawasho ah
Arag jagooyinkaaga iyo faa'iidada/khasaaraha
Wuxuu xisaabiyaa waxqabadkaaga faylalka buuxa 3 -dii sano ee la soo dhaafay.
Wuxuu raadiyaa meheradahaaga, saami qaybsiga, iyo kala qaybsanaanta saamiyada.
Guji hoosta si aad u hesho Ticker
Maaraynta Sanduuqa Maalgelinta iyo Madal Cilmi -baadhis ayaa loo sameeyay maalgashadayaasha iyo maareeyayaasha faylalka khibrada leh.
Waxay u oggolaaneysaa maalgashadayaasha iyo maareeyayaasha lacagta ee khibradda leh inay la socdaan oo qiimeeyaan faylalka maalgashiga ee ka kooban dammaanadaha, saamiyada, lacagaha, ikhtiyaarrada, iyo dammaanadaha kale.
Si kastaba ha noqotee, waa bixinta dukaanka kaliya ee bixisa cilmi baaris farsamo iyo maareynta faylalka.
Waxyaabaha aad ku samayn karto raadraacahan waxaa ka mid ah:
Xisaabi qiimahaaga saafiga ah, faa'iidada raasumaalka, guulaha aan la xaqiijin, ku noqoshada maalgashiga, iyo qoondaynta hantida.
La soco macaamilkaaga maalgashiga xisaabinta otomaatiga ah.
Abuur ilaa 999 faylal oo leh warbixinno la socda.
Guji hoosta si aad u hesho Master Investor 6.
Kani waa mid ka mid ah barnaamijyada maalgashiga bilaashka ah ee ugu wanaagsan oo leh aaladaha falanqaynta maalgashiga ee aadka loo qiimeeyay. Waxaa loo adeegsadaa falanqaynta joogtada ah ee faylalka maalgashiga.
Si kastaba ha noqotee, ikhtiyaarkan, waxaad ku gaari kartaa go'aanno xog -ogaal ah marka la isbarbardhigo lana falanqeynayo faylalka iyo alaabada maalgashiga.
Xusuusnow, aaladaha falanqaynta faylalka internetka waxaa ka mid ah; tijaabinta gadaasheeda, jilitaanka Monte Carlo, qoondaynta hantida xeeladda iyo wanaajinta iyo qaar kaloo badan.
Guji hoosta si aad u hesho Portfolio Visualizer.
Raad -raacahan maal -gashiga bilaashka ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka soo dhoofiso xaashiyaha ama aad gacanta ku geliso faylalkaaga.
Falanqeeyaha faylalka wuxuu bixiyaa liis maalgashi oo leh tafaasiil ay ku jiraan aasaaska, waxqabadka, wararka, iyo falanqaynta halista.
Guji hoosta si aad wax badan uga ogaato oo aad u hesho raadraaca software -kan.
15 Raad -raacayaasha ugu Wanaagsan Sanadka 2021 | Talooyinka Maareynta Lacagta
10 -ka Maaliyadeed ee Anshaxa ugu Fiican ee Maal -gashiga 2021 | Tusaha Khubarada
Maalgashiga $ 100 samee $ 1000 maalintii | 21 Maalgashi oo sugan 2021
Sida loo iibsado Foxconn Stock ee Mareykanka 2021 | Tallaabo - Tusaha Tallaabada
10 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Bixin Karo Miisaanka 2021 -ka
Ka Bilaabmaysa Da'da 50: Siyaabaha Ugu Dhaqsaha Badan uguna Fudud 2021
Jadwalka Mawduucyada Qarso Runtii ma ku bilaabi karaa 50? Talooyin ku saabsan sida loo bilaabo Bilowga 50#1…
Dib -u -eegista Gettefrone.com 2021: Sideen ku hubnaa inaysan ahayn khiyaano?
Jadwalka Mawduucyada Qari Dib -u -eegista Gettefrone.com: Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Gettefrone.com waa khiyaamo ama sharci? (Dib u Eegid Buuxda)#1 Qiimaynta Shirkadda#2…
Jadwalka Mawduucyada Qarsoon Maxay tahay inaan u Maal -gashado Dhulka Beeraha? Sida Loo Iibsado Beeraha Dhulka Maalgashiga Si Toos ah U Iibso Saamiyada ...
Jadwalka Mawduucyada Qari Maxay Yihiin Lacagaha Index -ka?
Jadwalka Tusmada Qarso Waa Maxay Kaydka Saliidda Ugu Fiican ee La Iibsan Karo?#1. Exxon Mobil#2. Wadarta#3. Royal Dutch Shell#4.…
Jadwalka Mawduucyada Qari Waa Maxay Rabitaanku? Sidee bay Hammuhu u Shaqeeyaan Adeegyada Maaraynta LacagtaCash Barnaamijka Dib -u -noqoshadaMuuqaalka Himilooyinka